Hadiyadaha ruuxiga ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Hadiyadaha ruuxiga ah waxaa lasiiyaa adeeg
Waxaan fahamsanahay qodobadan soo socda ee muhiimka ah ee laga soo qaatay Kitaabka Quduuska ah ee la xiriira hadiyadaha ruuxiga ah ee Eebbe siiyay carruurtiisa:
Masiixi kasta wuxuu leeyahay ugu yaraan hal hadiyad ruuxi ah; guud ahaan laba ama saddex.
Qof walbaa waa inuu ku deeqo hadiyadooda si loogu adeego dadka kale ee bulshada.
Qofna ma haysto hadiyadihii oo dhan, sidaa darteed waa inaan midba midka kale u baahan nahay.
Ilaah ayaa go'aamiya cidda hela hadiyadda.
Waxaan had iyo jeer fahamsan nahay inay jiraan hadiyado ruuxi ah. Laakiin dhowaan waxaan si dheeraad ah u ogaanay. Waxaan aqoonsan nahay in ku dhawaad ​​xubin kasta ay rabaan inay kaqeybqaataan wasaarad ("wasaarad" waxaa loola jeedaa dhammaan wasaaradaha oo aan ahayn shaqada xoolo-dhaqatada ah). 1, 12,7 Butros 1). Ka warqabka hadiyadaha ruuxiga ah waa duco weyn qof kasta iyo kaniisadaha. Xitaa waxyaabo fiican ayaa si khaldan loo isticmaali karaa sidaa darteedna waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dhowr ah oo la xiriira hadiyadaha ruuxiga ah. Dabcan, dhibaatooyinkaasi kuma eka gooni kaniisad gaar ah, marka waa ay fiicantahay in la arko sida hogaamiyaasha kale ee Masiixiyiintu ula tacaameen dhibaatooyinkaas.
Diidmada in lagu adeego
Tusaale ahaan, dadka qaar waxay u isticmaalaan fikradda ah hadiyadaha ruuxiga ah marmarsiinyo aaney ugu adeegin kuwa kale. Tusaale ahaan, waxay yiraahdaan hadiyaddoodu waxay ku jirtaa khadka sidaa daraadeed waxay diidaan inay qabtaan adeeg jacayl kale. Ama waxay ku andacoodaan inay macalin yihiin oo diidaan inay u adeegaan si kale. Waxaan u malaynayaa in tani ay tahay mid ka soo horjeedda wixii Bawlos ku talajiray inuu yiraahdo. Wuxuu sharraxay in Ilaah hadiyado siiyo dadka si loogu adeego oo uusan u diidin inay u adeegaan. Mararka qaar shaqada waa in la qabtaa, iyadoon loo eegeyn inuu qof hadiyad gaar ah u leeyahay iyo in kale. Qolalka kulanka waa in la diyaarsadaa oo la nadiifiyaa. Naxariis waa in lagu bixiyaa masiibo, haddii aan hadiyad u leenahay naxariis iyo haddii kale. Xubnaha oo dhami waa inay awood u yeeshaan inay sharaxaan injiilka (1 Butros 3,15:XNUMX), inay leeyihiin hadiyadi wacdinta iyo inkale.Waa wax aan macquul aheyn in loo maleeyo in dhammaan xubnayaasha loo xilsaaray inay u adeegaan waxa ay si gaar ah u yihiin waa dad hibo leh. Kaliya maahan in qaabab kale oo adeeg loo baahan yahay in la qabto, laakiin dhammaan xubnahu waa inay sidoo kale la kulmaan habab kale oo adeeg. Adeegyada kaladuwan ayaa had iyo jeer naga cawiya aaggaga raaxada - aaga aan ku dareemno hibo. Ka dib oo dhan, waxaa laga yaabaa in Ilaah doonayo inuu horumar ku sameeyo hadiyad annaga ku dhex jirta oo aanan weli aqoonsan!
Dadka badankood waxaa la siiyaa hal ilaa seddex hadiyadood oo waaweyn. Sidaa darteed, waxaa ugufiican haddii aagga ugu muhiimsan ee qofku u adeego ay ku jiraan mid ama in ka badan aagagga hadiyadaha ugu waaweyn. Laakiin qof walbaa waa inuu ku farxaa inuu u adeego meelaha kale hadii kaniisada ay ubaahantahay. Waxaa jira kaniisado waaweyn oo u dhaqma sida ku xusan mabda'a soosocda: “Waa inaad doorataa wasaarado gaar ah hadba sida hadiyadahaaga hadda jira, laakiin sidoo kale waa inaad noqotaa (ama diyaar u tahay) inaad kaqeyb gasho wasaaradaha kale ee sare ee ku saleysan taas Baahiyada kuwa kale ”. Nidaamka noocan ahi wuxuu caawiyaa xubnaha inay koraan iyo adeegyada bulshada waxaa loo qoondeeyey oo keliya wakhti xadidan. Adeegyadan sifiican ugu habboon ayaa loo beddelaa xubnaha kale. Qaar ka mid ah wadaadada khibrada leh ayaa ku qiyaasay in xubnaha kaniisadaha kaliya ay ku tabarucaan 60% wasaaradooda hadiyadooda aasaasiga ah.
Waxa ugu muhiimsan waa in qof kastaa si uun uga qayb qaato. Adeeggu waa mas'uuliyad mana ahan wax ah "Waan aqbali doonaa oo keliya haddaan jeclaado".
Soo hel hadiyaddaada
Hadda fikrado dhowr ah oo ku saabsan sida aan ku ogaan karno hadiyadaha ruuxiga ah ee aan heysano. Waxaa jira dhowr qaab oo tan loo sameeyo:
Imtixaanka hadiyadaha, imtixaannada iyo alaabada
Is-falanqaynta danaha iyo waaya-aragnimada
Xaqiijinta dadka si fiican kuu yaqaan
Dhamaan sedexdaan dariiqo waa caawin. Gaar ahaan waa mid waxtar leh haddii dhammaan saddexda ay horseedaan jawaab isku mid ah. Laakiin saddexda midkood midkoodna waa cillad la'aan.
Qaar ka mid ah qoraallada qoraalka ah ayaa ah qaab si gaar ah is-u-gaasik ah oo gacan ka gaysanaya muujinta aragtida dadka kale ee kugu saabsan. Su'aalaha macquulka ah waa: Maxaad jeclaan lahayd inaad qabato? Maxaad si fiican u qaban kartaa? Maxay dadka kale dhahaan inaad sifiican ushaqeyso? Baahi noocee ah ayaad ku aragtaa kaniisada dhexdeeda? (Su'aasha ugu dambaysa waxay kuxirantahay indha indhaynta in dadku sida caadiga ah si gaar ah ula socdaan halka ay ku caawin karaan. Tusaale ahaan, qof hadiyad naxariis leh ayaa u malayn doona in kaniisaddu u baahan tahay naxariis badan.)
Inta badan ma naqaanno hadiyadeheenna ilaa aan ka isticmaalno oo aan u aragno in aan kuqasbnay waxqabad gaar ah. Kaliya maahan hadiyado ku koraa khibrad, sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa khibrad. Sidaa darteed, way caawinaysaa haddii Masiixiyiintu mararka qaarkood isku dayaan noocyo kala duwan oo adeeg. Waad wax ku baran kartaa naftaada waxna ku caawin kartaa dadka kale.